बेलायतद्वारा सहायता बजेट कटौती : नेपालसहित दक्षिण एसियाको जनस्वास्थ्यमा असर पुग्ने – Health Post Nepal
बेलायतद्वारा सहायता बजेट कटौती : नेपालसहित दक्षिण एसियाको जनस्वास्थ्यमा असर पुग्ने
२०७८ असार २ गते १२:३७
बेलायत सरकारले कोभिड–१९ महामारीको संकटसँग सामना गरिरहेका नेपालसहित दक्षिण एसियाली र अन्य देशमा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आएको सहायता बजेटलाई कटौती गरेको छ।
उसले अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघ (आइपिपिएफ) मार्फत् सहयोग गर्दै आएको करिब एकसय मिलियन अमेरिकी डलर कटौती गरेको जनाइएको छ।
सो महासंघमा नेपाल परिवार नियोजन संघसहित विश्वका १४१ देशका परिवार नियोजन संघ आबद्ध छन्। अब ती देशका सीमान्तकृत किशोर-किशोरी, युवा तथा महिलाहरु यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनेछन्।
बजेट कटौतीको असरले विशेष गरी ती देशका मानवीय विपद प्रभावित क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदायलाई प्रदान गरिँदै आइएको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने जनाइएको छ ।
साथै सहायता कटौतीले ती देशमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनासमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपाल परिवार नियोजन संघका व्यवस्थापक डा. नरेशप्रताप केसीले सहायता कटौतीले संघले कार्यान्वयन गरिरहेको पहुँच परियोजना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए।
परियोजना बन्द हुँदा किशोरी तथा महिला यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुने उनले बताए। यसबाट विशेषगरी मानवीय विपद क्षेत्रका लगभग १ लाख २० हजार सीमान्तकृत तथा जोखिम समुदायका व्यक्ति ती सेवाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।
संघले सहायता कटौतीले सेवा प्रभावितका साथै केही दक्ष सेवा प्रदायक तथा कर्मचारीको कटौतीमा पनि पर्ने देखिने जनाएको छ। संघले हरेक चुनौतीका अगाडि नयाँ सम्भावना पनि हुने जनाउँदै आफ्नो श्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म यौन तथा प्रजनन् स्वाथ्य सेवा निरन्तर जारी राख्ने व्यवस्थापक डा. केसीले बताए। सामान्य तथा मानवीय विपदका अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सेवामा समर्पित रहने संघले जनाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको नीति ‘ग्लोबल ग्याग रुल’ लाई हटाउने हालै निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयलगत्तै बेलायतले पनि दक्षिण एसियाली मुलुकलाई जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदान गरिरहेको सहायता बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।